Xilliga ay Real Madrid ku dhawaaqi doonto Heshiisyada Eden Hazard iyo Luka Jović oo la sii shaaciyay – Gool FM
(Spain) 19 Maajo 2019. Shabakada “Fox Sport” ayaa waxay shaaca ka qaaday, sida ay ka soo xigatay ilo gaar ee dhanka Real Madrid ah, taariikhda rasmiga ah ee lagu dhawaaqi doono heshiisyada cusub ee muhiimka u ah kooxda Los Blancos.
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay go’aamisay heshiisyada xidigaha Eden Hazard iyo Luka Jović, iyagaoo doonaya in sida ugu dhasiyaha badan ay ugu dhawaaqaan.
Hadaba goormee ayay kooxda Real Madrid si rasmi ah ugu dhawaaqi doontaa heshiisyada labada xidig ee Eden Hazard iyo Luka Jović?.
Shabakada “Fox Sport” ayaa sheegtay Luka Jović uu ciyaaray kulankiisii ugu dambeeyay kooxdiisa haatan ee Eintracht Frankfurt, halka Eden Hazard uu kulankiisa ugu dambeeya ee kooxda Chelsea uu u ciyaari doono finalka tartanka UEFA Europa League, kaasoo ay ku wada balansan yihiin Arsenal 29 bishan May.
Luka Jović ayaa wuxuu ugu dhaqaaqi doonaa kooxda Real Madrid 60 milyan oo euros, isagoo saxiixi doono heshiis 5 sano ah, wuxuuna si rasmi ah u caga dhigan doonaa garoonka Santiago Bernabéu inta lagu gudi jiro isbuucan.
Sidoo kale Eden Hazard ayaa heshiiska uu ku imaan doono kooxda Real Madrid wuxuu ku kici doonaa aduun dhan 100 milyan oo euros, waxaana heshiiskiisa si rasmi ah loogu dhawaaqi doonaa maalinta ugu dambeysa ee bishan, gaar ahaan 30 May.